नर्सका लागि हरेक बि’रामी नै उसको म’न्दिर हो ! – Khabarhouse
नर्सका लागि हरेक बि’रामी नै उसको म’न्दिर हो !
Khabar house | २५ माघ २०७६, शनिबार ०५:३५ | Comments
काठमाडौं : ठमेलमा जन्मेकी उनको बाल्य काल त्यसै क्षेत्रमा बित्यो । उनको घरमा पठन पाठनको वाता वरण राम्रो थियो । उनका पिताजीले संस्कृत पढेका थिए । आमा सामान्य साक्षर मात्रै भए पनि आफ्ना सन्तानलाई पढाउनु पर्छ, उच्च शिक्षा दिलाउनु पर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट थिइन् । उनको ध्यान छोरा छोरीहरूको पढाइमा धेरै थियो ।
उनकी आमा महिला शिक्षाप्रति उदार थिइन् । आमा जहिले पनि ‘महिलाले पनि पढ्नु पर्छ । पढिलेखी ठूलो मानिस बन्नुपर्छ, भन्नु हुन्थ्यो’ उनले सुनाइन्। यसले सधैँ शशिकला सुब्बा (७६) लाई पढाइप्रति उत्साही बनायो। आमाको वचनले उनलाई सधैँ घ’चघच्याइ रह्यो । भन्छिन्, ‘‘आमा मेरो पहिलो शिक्षक ।’’ उहाँकै प्रे’रणाले आफू आज यो स्थानमा आएको उनी गर्वका साथ सुनाउँछिन् ।
मंगलबार सहकर्मी सुनील प्रधानसँग वरिष्ठ स्वास्थ्यकर्मी (नर्स) तथा सुषमा कोइराला नर्सिङ्ग क्याम्पसकी पूर्व क्याम्पस प्रमुख शशिकला सुब्बाको निवास पुग्दा उनले आफू आमाको विशाल सोचका कारण नै यहाँ पुगेको बताइन्। उनले भनिन् “आमामा त्यो दृ’ष्टिकोण कसरी आयो ? मलाई थाहा छैन ! हामी सम्पन परिवारका नै थियौं, उतिखेर । खान लाउन क’मी थिएन ।
आमामा महिलाले पनि पढ्नु पर्छ भन्ने सोच सधैँ रह्यो ।” आमामा रहेको सोही तत्त्वज्ञानले शशिकलाको भविष्य उज्यालो हुँदै गएको थियो । सरकारी जागिरबाट अवकास लिएपछि उनी केही गर्ने सोच्दै थिइन् । त्यसै बेला सुषमा कोइराला नर्सिङ कलेज स्थापना भयो । क्याम्पस प्रमुखको प्रस्ताव आयो । उनले संस्थापक प्रि’न्सिपलको जिम्मेवारी पाइन् । जहाँ उनले तीन वर्षको समय बि’ताइन् ।
त्यसपछि उनी होली भिजन टेक्निकल क्याम्पसमा पनि प्रमुख भइन् । यसरी निजी क्षेत्रका क्याम्पस हरूमा रहेर उनले करिब साढे १३ वर्षको समय बिताइन् । ती कलेजहरूमा रहँदा उनले नर्सिङ्ग पढ्न आउनेहरूलाई आफूले जानेको ज्ञान र अनुभव बाँडिन् । उनी भन्छिन्, “हरेक नर्सका लागि पे’सेन्ट उसको म’न्दिर हो । त्यही सम्झेर काम गर्नसक्नु पर्छ एउटा नर्सले ।
र अर्को कुरा, एउटा नर्स सबैभन्दा कुशल गृ’हिणी र आमा पनि हो । किनभने एउटा नर्सलाई सारा कुरा थाहा हुन्छ ।” नर्सिङ्ग सेवामा लामो समय बिताएकी वरिष्ट व्यक्तित्व शशिकला सुब्बाका अनुसार नर्सिङ्ग पेसा एकदमै राम्रो पेसा र संसारभरि बि’क्ने पेसा हो । यस पेसामा लाग्नेमा क’रुणा मा’या र से’वाभाव हुनै पर्ने उनको भनाइ छ । भिडीयो यहाँ लिंकमा छ ।